Daawo Ilmo agoon ah oo Sacuudiga laga soo tarxiili lahaa oo Kanada ka helay Magangelyo. | shumis.net
Home » News » Daawo Ilmo agoon ah oo Sacuudiga laga soo tarxiili lahaa oo Kanada ka helay Magangelyo.
Daawo Ilmo agoon ah oo Sacuudiga laga soo tarxiili lahaa oo Kanada ka helay Magangelyo.
Qoyskaasi oo dhamaantooda ku soo koray Sacuudiga ayaa waxaa uu aabahooda ka mid ahaa Shaqaalaha Qunsulliyadda soomaalida ee magaalladda Jeddah ee dalka Sacuudiga, kaasi oo dhowr sanno ka hor u geeriyooday cuddurka Macaanka (Diabetes).
Sidoo kale, Hooyadooda ayaa iyadana u geeriyootay cuddurka Kansarka.
Si kastaba ha ahaatee, Safaaradda Somalia ku leedahay Sacuudiga iyo Wasaaradda Arrimaha Dibedda Somalia ayaa la sheegay inaysan waxba kala soconin dhibaatadii haystay Carruurtan oo uu dhalay Hawlwadeen ka tirsanaa Qunsulliyadda Somalia ee Sacuudiga oo geeriyooday.
Title: Daawo Ilmo agoon ah oo Sacuudiga laga soo tarxiili lahaa oo Kanada ka helay Magangelyo.